MacID wuu sii jiri doonaa xitaa haddii Apple ay soo bandhigto Aqoonsiga Taabashada si aad u furto Mac | Waxaan ka socdaa mac
MacID wuu sii jiri doonaa xitaa haddii Apple ay soo bandhigto ID ID si aad u furto Mac-gaaga
Ciise Arjona Montalvo | | Mac App Store, Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac
Waxaan maalmahan ka hadlay suurtagalnimada weyn ee ah in Apple ay soo saari doonto qaab cusub oo lagu furo adiga Mac leh Aqoonsiga Taabashada mid ka mid ah nooca xiga ee OS X. Kuwa ka warqaba, tan waxaa horay loogu samayn karaa iyadoo la adeegsanayo app Store, sida MacID, laakiin haddii Apple u keeno muuqaalkan loogu talagalay rakibidda asalka ah ee OS X. Maxaa ku dhici doona codsiyaddan dhinac saddexaad?.
Weli ma jirin xaqiijin la'aan in muuqaal noocaas ah la damaanad qaadayo inuu ku yimaado Mac, maadaama aysan waxba ka badnayn a xanta, oo si daacadnimo ah waxaan u maleyneynaa inaanan ogaan doonin hubaal illaa WWDC 2016, iyo Apple waxay ku dhawaaqeysaa OS X cusub. Dhinaca kale, aan dhahno si mala awaal ah Apple ayaa soo bandhigeysa muuqaalkan. Sidee ayay u saameyneysaa codsiyada dhinac saddexaad ee sameeya waxyaabo isku mid ah?.
Inkasta oo dadka badankood dhihi doonaan waxay bilaabi doonaan oo keliya isticmaalka OS-ka OS iyo macruufka muuqaalka ee barnaamijyada dhinac saddexaad si ay ugu furfuraan Mac-kooda iyadoo la adeegsanayo Touch ID, weli waxaa jira qaar muuqaalada isbadal sameyn doona iyada oo la raacayo hawsha soo socota ee soo socota ee Apple ay ku milmi karto.
Tusaale ahaan, MacID kaas oo laga iibsan karo App Store-ka 3,99, wuxuu leeyahay astaamo dhowr ah oo ku saabsan mustaqbalka Aqoonsiga dokumentiga ka Apple oo aan lagu xusin wararka xanta ah, iyo in laga yaabo in aan lagu dari doonin mid ka mid ah hirgelinta nidaamka laftiisa Aqoonsiga dokumentiga laga bilaabo Apple ee kombiyuutarada Mac.
Haddii Apple kuu oggolaan lahayd inaad ku furto Mac-gaaga dareemayaasha taabashada taabashada adigoo adeegsanaya a isku xirnaanta Bluetooth, oo aad go'aansatay inaad joojiso isticmaalka MacID gebi ahaanba, wali waad ka maqnaan doontaa muuqaalada kala duwan ee codsiyada-saddexaad sida MacID ay tahay inay bixiyaan sida:
Wuxuu la shaqeeyaa Macs badan, aaladaha iOS, iyo Apple Watch isla waqtigaas.
Furo Mac-gaaga adoo adeegsanaya Aqoonsiga Taabashada, oo leh lambar sir ah, Apple Watch, ama Dhagax.
Ogeysiisyada is-dhexgalka ah ee xitaa kaa dhigaya inaad furto qalabkaaga iOS.
Xakamee codkaaga Mac-ga ah, oo la shaqeeya iTunes iyo Spotify.
Adigu gacantaada ku xir Mac-gaaga, ama ku bilow shaashadda meel fog.
Otomaatiga-qufulka marka qalabka macruufka ka fogaado aad Mac.
Ku soo dhowaanshihiisa si otomaatig ah ayuu u furayaa markaad ku soo noqoto Mac-gaaga.
Taabo toobiyeyaasha 3D.
Widget-ka Xarunta Wargelinta.
Ka dooro isku-dhafka midabka.
Waxaan u adeegsadaa MacID si aan ugu oggolaado shaqooyinka u baahan lambarka sirta ee OS X-gaaga. (Kaliya loogu talagalay xisaabaadka maamulka)
MacID ee OS X waligiis kuma xirna internetka adigoon ogolaan.
Furaha sirtaada OS X lama soo saarin waligoodna kama tagayo Mac-gaaga.
Si aan caadi aheyn u fududahay in la isticmaalo, laakiin waxaa ka buuxa muuqaalo iyo xulashooyin.
Liisku wuxuu muujinayaa in xitaa haddii Apple ay isku dhafan tahay muuqaal ka mid ah Taabo aqoonsi Mac-yadaada ah, weli waxaa jira tan oo ah astaamo yaab leh oo la qaado MacID, maxaa yeelay liiska kor ku xusan ayaa ka weyn shaqooyinka.
uu muuqaalada fiican iyada oo aan la buunbuuninaynin xitaa howlaha ugu fudud, iyo Aqoonsiga Taabashada ee Apple hirgelin karo lama imaan doono waxyaabo badan iyo astaamo adeegsade sida uu leeyahay MacID.
Guud ahaan, habka guud ee Apple waa in la sameeyo wax la kulmaya shuruudaha xasilloonida iyo sahlanaanta isticmaalka. The isticmaaleyaasha horumarsan ee doonaya xulashooyin badan si ay u jaangooyaan inta badan dabeecad ahaan, waxay ku hadhayaan mugdiga rajada ah in horumarinta app waxay la kulmi karaan oo ay dabooli karaan baahiyahaaga.
Aqoonsiga Taabashadu waa shaqeyn weyn, oo waxaan u maleynayaa in Apple ay kaliya bilawday inay ka faa'iideysato awooddeeda. Aqoonsiga taabashada ayaa laga soo rogi karaa aaladaha iOS iyadoo inta kale ee aaladaha Apple mar uun la qaban karo, laakiin adeegyada dhinac saddexaad waxay u horseedi karaan wanaag si loo hubiyo. hel khibrada ugu fiican ee isticmaale.
para Kane soosaaraha MacID, Maahan dhamaadka aduunka ee dalabkaaga, ilaa iyo hadana qorsheyso inaad sii wado taageerida astaamaha cusub, xitaa haddii Apple ay astaamahan u keento Mac-da cusub OS X XUMAY.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » MacID wuu sii jiri doonaa xitaa haddii Apple ay soo bandhigto ID ID si aad u furto Mac-gaaga
Apple waxay soo bandhigi kartaa MacBook Pro cusub oo leh Touch ID iyo taabashada taabashada leh shaashadda OLED
Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Brooklyn ayaa lagu xaqiijiyay Codsiyada Shaqada Apple